Tag: isiokwu ojiji | Martech Zone
Naanị m nwetara email a: Anụrụ m okwu Douglas na Blog Indiana banyere otu SEO si nwụọ na isiokwu adịghị mkpa dịka ha dịbu. Kedu ka ị si eme ka ndị ahịa kwenye nke a? Ga-enwe mmasị na gị. Mara: Ọ bụ ezie na Keywords abụghị ihe dị mkpa still ọ ka dị mkpa iji ezi okwu ya. Anyị na ndị ahịa anyị na-anọ ogologo oge na nyocha isiokwu. The slide m na-akọrọ ndị na-ege ntị na
Ka anyị na-aga n'ihu ịbanye na nyocha miri emi na nke miri emi na ndị ahịa na ụdị isiokwu ndị na-adọta okporo ụzọ ọchụchọ, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere echiche na-ezighi ezi mgbe ọ bịara na nyocha isiokwu na ojiji. Otu peeji nwere ike ịkwado nke ọma maka ọtụtụ isiokwu. Ndị mmadụ na-eche na ha kwesịrị inwe otu peeji nke isiokwu ọbụla ha chọrọ target Ọ bụghị naanị ya. Ọ bụrụ na ị nwere peeji nke na-akwado